Ọgwụgwọ osisi ọrịa | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ọgwụgwọ osisi ọrịa
Gloxinia bụ osisi na-egbuke egbuke nke nwere okooko osisi na-adọrọ adọrọ, mkpụrụ osisi vevelvet na obere ihe dị mkpirikpi, nke bụ otu n'ime ezinụlọ Gesneriyev. N'ebe obibi ya, a pụrụ ịchọta ya na oké ọhịa nke oké ọhịa nke Peru na Brazil. Gloxinia adịghị mma, ma ka ọ na-eto ma na-etolitekarị n'ụlọ, ndị na-eme nri ga-eme mgbalị ụfọdụ.
Ndepụta zuru ezu nke ndị fungicides maka osisi
Fungicides bụ ihe ndị na-egbochi ma ọ bụ na-ebibi pathogens dị iche iche osisi. Enwere otutu nkowa nke ụdị pesticides, dabere na ihe omume, àgwà ndị e ji mara, na usoro nke ngwa. Ọzọ, anyị na-enye ndepụta zuru oke nke fungicides, nke e depụtara na ndepụta nke usoro ndị kachasị ewu ewu maka osisi na aha na nkọwa ha.
Ngwurugwu na-efe efe "Iwu": ntụziaka maka iji ọgwụ
Nje ọgwụ "Ordan" agrochemists kwadoro ichebe mkpụrụ vaịn, eyịm, tomato, cucumbers, poteto na ọgwụ nightshade ndị ọzọ site na ọrịa ndị ọrịa. Ọtụtụ ngwá ọrụ na-eme ka ndị na-eri ahụ na-eri ahụ na-arụ ọrụ na-enweghị ike ịnagide mbubreyo, alteranriosis, na peronospora. Ọ bụ àgwà a nke na-egosi ọdịiche dị na fungicide "Ordan", nke na-enweghị ihe ọ bụla nchịkwa nwere ike ịgbanwe.
"Previkur Energy": nkọwa, ngwugwu, ngwa
Onye ọ bụla na-elekọta ubi na-eme ngwa ngwa ma ọ bụ mgbe ọ ga-emeri osisi na osisi sitere na pests na-agwọ ọrịa. Onye ọ bụla nwere ụzọ nke aka ya si emeso ha, ahụmahụ a gosipụtara. E nwere ọtụtụ ọgwụ ọjọọ na ahịa maka nzube ndị a, ma ugbu a, anyị ga-ekwu banyere otu n'ime ndị a akpọ Previkur Energy.